China diatomite kieselguhr diatomaceous Umanyolo Inhlabathi Improvement Ukuchibiyela Earth Granules ifektri abakhiqizi | I-Yuantong
diatomite kieselguhr diatomaceous Umanyolo Umhlabathi ngcono izichibiyelo zomhlaba
Ukuthuthuka kwenhlabathi, ukungezelelwa kwenhlabathi
Umanyolo womhlaba we-diatomaceous I-granules yokuthuthukisa inhlabathi
isithuthukisi somhlabathi esingajwayelekile
20kg / Isikhwama
50000 Metric Ton / Metric Amathani Inyanga ngayinye
Ukupakisha: Isikhwama sephepha esingu-1. 2.Export standard PP nokwelukiweyo isikhwama net 20 kg. 3.Export ejwayelekile 1000 kg PP nokwelukiweyo 500kg isikhwama .4.As njengoba ikhasimende edingekayo.Shipment: 1. Ngokuqondene nenani elincane (ngaphansi kwama-50kgs), sizosebenzisa i-Express (TNT, FedEx, EMS noma i-DHL njll), elula. Ngokuqondene nemali encane (kusuka kuma-50kgs kuye kuma-1000kgs), sizoletha ngendiza noma ngolwandle. 3. Ngokuqondene nenani elijwayelekile (ngaphezu kwama-1000kgs), besivame ukuthunyelwa ngomkhumbi.
Noma iyiphi ichweba laseChina
Ubuningi (Amathani Metric) 1 - 50 > 50
Est. Isikhathi (izinsuku) 10 Kuxoxiswane
Izinzuzo zokuthuthuka kwenhlabathi ye-diatomaceous:
1. Kuyaziwa ukuthi i-silicon ibalulekile ekukhuleni okunempilo kwezitshalo nezimpande. Yize i-silica yama-amorphous ekwakhiweni komhlaba okwe-diatomaceous ingancibiliki emhlabathini. Kodwa-ke, kuyigugu ukuthi inani elincane yi-silicon encibilikayo, engakhishwa kancane kancane futhi imuncwe izimpande zesitshalo, ngaleyo ndlela ithuthukise kakhulu ukuvikeleka kwesitshalo futhi ithuthukise ikhono lesitshalo ukumelana nezifo.
2. Umhlaba we-diatomaceous ungumbiwa wemvelo we-adsorbent wemvelo, ngakho-ke unemisebenzi yokugcina amanzi, ukugcinwa kukamanyolo nokukhululwa okuqhubekayo. Yonga amanzi, wonge umanyolo, wonge isikhathi bese wonga imali.
3. I-diatomaceous earth iyiminerali enezinongo enesenzo se-capillary kanye ne-lateral lateral shift function kumanzi nesisombululo sezakhamzimba, ngakho-ke iyi-substrate ekahle yesiko elingenhlabathi.
4. IDiatomite ingukukhanya okungajwayelekile kwezinhlayiya ezinokungalingani, okunganciphisa ukuminyana kwenhlabathi, inhlabathi evulekile, kunciphise ukuhlangana, futhi kube lula ukungena komoya, ukujikeleza nokugeleza kwezimpande zezitshalo.
5. Isakhiwo esiyingqayizivele se-porous se-diatomaceous earth singadlala indima emhlabathini, sikhuthaze ukukhula kwama-bacteria azuzisayo kule ndawo, silinganise umswakama, izinga lokushisa kanye nomthombo wokudla, futhi ngesikhathi esifanayo kube nomphumela wokubulala izinambuzane nezifo, ngenkathi usebenzisa ama-diatoms Umhlabathi ungakhuphula ukungena komhlaba futhi ukwandise nokuqukethwe kwe-oxygen yenhlabathi, ukuze amabhaktheriya angakwazi ukuphila. Lokhu kungonga amakhemikhali amaningi okubulala ukhula kanye ne-pesticides, angagcini ngokuvikela imvelo, kepha futhi anciphisa nezindleko zokwelapha i-turf nezitshalo.
6. Njengoba umhlaba we-diatomaceous ungumbiwa wezinto eziphilayo, ungowokupholisa umhlabathi ngokwemvelo, uphephile futhi ulungele imvelo.
Chofoza esithombeni ngenhla!
Q: U-oda kanjani?
IMP: ISINYATHELO 1: Sicela usitshele ngemingcele yobuchwepheshe obudingayo
ISINYATHELO 2: Bese sikhetha uhlobo oluqondile lwe-diatomite filter aid.
ISINYATHELO 3: Ama-Pls asitshela izidingo zokupakisha, ubuningi nesinye isicelo.
ISINYATHELO 4: Ngemuva kwalokho siphendula le mibuzo bese sinikeza okuhle kakhulu.
Q: Uyakwamukela umkhiqizo we-OEM?
Q: Ungakwazi yini ukuphakela isampula isivivinyo?
A: Yebo, isampula limahhala.
Q: izolethwa nini?
A: Isikhathi sokuthumela
- I-Stock oda: Izinsuku eziyi-1-3 ngemuva kokuthola inkokhelo ephelele.
- I-OEM oda: Izinsuku eziyi-15-25 ngemuva kwediphozi.
Q: yiziphi izitifiketi ozitholayo?
A: I-ISO, i-kosher, i-halal, ilayisense yokukhiqiza ukudla, ilayisense lezimayini, njll.
Q: Unayo eyami i-diatomite?
A: Yebo, Sinezinqolobane ezingaphezu kwe-100 miliion diatomite reserves ezibhekele ngaphezu kwe-75% yawo wonke amaShayina afakazelwe izinqolobane. Futhi singumkhiqizi wemikhiqizo ye-biigest diatomite ne-diatomite e-Asia.
Langaphambilini i-diatomaceous earth granules fertiliser Umhlabeleli othuthukisa umhlaba
diatomite amaminerali isilwane feed okufakiwe
Ibanga lokudla le-diatomaceous earth powder
Ekubunjweni Centrifugal enamathela emhlabeni diatomite dia ...
ezolimo eziphilayo e-diatomaceous e ...
F30 TL301 diatomite epulazini amakhemikhali Pe esebenza kahle ...
diatomaceous diatomite calcined umhlaba powder